Dawladda Soomaaliya oo guulo ka sheegatay dagaalladii saacadihii ugu danbeeyey ka dhacay Muqdisho. [Akhris …] – Radio Daljir
Dawladda Soomaaliya oo guulo ka sheegatay dagaalladii saacadihii ugu danbeeyey ka dhacay Muqdisho. [Akhris …]
Muqdisho, Aug 25- Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa guulo wax ku ool ah ka sheegatay dagaalladii saacadihii ugu danbeeyey ka dhaceyey gudaha magaalada Muqdisho ee caasumadda Soomaaliya.
Taliyaha ciidanka daraawiishta ee dawladda KMG ah ee Soomaaliya Shiikh C/risaaq Maxamed Qaylow, oo shir jaraa?id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa faah-faahin dheeraad ah ka bixiyey dagaalladii illaa shalay ka dhacayey magaalada Muqdisho ee u dhaxeeyey ciidamada dawladda Federaalka ah iyo kuwa ururrada hubaysan ee dawladda ku kacsan.
Taliyuhu waxaa uu shirkiisaas jaraa?id ku sheegay in ay dhammaanba cagta mariyeen fariisimo kooxaha dawladda ku kacsan ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho, isla markaana ay qab-qabteen tiro maxaamiis ah oo ay hadda gacanta ku hayaan.
Md. Qaylow, waxaa uu saxaafadda tusay maydadka tiro dad ah oo uu sheegay in ay yihiin kooxohii dagaallada ay la galeen labadii maalmood ee ugu danbeeyey, wuxuuna intaasi ku daray isla haddana in ay ku howllan-yiin dadaallo kale oo sida uu sheegay ku aaddan ammaanka magaalada caasumadda ah e Muqdisho.
Dhanka kale sarkaal u hadlay ururka Al-shabaab oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo, ayaa sheegay in ay guulo ka gaareen dagaalladii ka dhacay magaalada Muqdisho ee u dhaxeeyey iyaga iyo ciidanka dawladda Soomaaliya.
Sikastaba ha ahaatee dagaallada hadda ka soo cusboonaaday Muqdisho oo la tilmaamayo in ay yihiin kuwa xooggan, ayaa ku soo beegmaya xilli lagu jiro bishii bisha barakaysan ee Ramadaan oo dhammaan umadda muslimka ahi ay cibaadaystaan.